Wakiilada QM iyo Midowga Afrika oo la kulmay musharaxiinta u taagan xilka M/weynaha KG… – Hagaag.com
Wakiilada QM iyo Midowga Afrika oo la kulmay musharaxiinta u taagan xilka M/weynaha KG…
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Amb. Nicholas Haysom iyo Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Amb. Francisco Madiera ayaa kulan saacado qaatay la yeeshay Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Musharaxiintan oo gaarayay illaa 7 musharax oo mid ka mid ah ay aheyd Haweeney ayaa waxaa ka dhex muuqday Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo dhowaan Wasaaradda Amniga war saxaafadeed ay soo saartay ku shaacisay inay ka joojisay inuu u tartamo doorashada.
Nicholas Haysom ayaa Musharaxiinta kula dardaarmay in doorashadan ay noqoto mid si habsami leh oo nabdoon u dhacdo, isagoo ku adkeeyay in Koonfur Galbeed ay tahay qeyb muhiim ah oo ka mid ah hanaanka xasilinta dalka.
Sidoo kale Wakiilka Midowga Afrika Amb. Francisco Madiera ayaa sheegay inay xaqiijin doonaan ammaanka doorashada, isla markaana AMISOM ay qaadan doonto door ku aadan damaanad qaadida amniga doorashada.
Socdaalka Wakiilada Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika ku tageen Baydhabo ayaa sidoo kale waxaa uu qeyb ka ahaa arrimaha xalinta khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyagoo kulan gaar ah la qaatay Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan.
Doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa in 17-ka bishan November ay dhacdo, waxaana ka socda magaalada Baydhabo olole doorasho iyo diyaar garow loogu jiro doorashada.